မြန်မာ- ထိုင်း ချစ်ကြည်ရေး တံတားအမှတ် ၂ ဖွင့်ပွဲတွင် တက်ရောက်သည့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နှင့် ထိုင်း ဝန်ကြီးချုပ်နှင့် အဖွဲ့ / ကရင်အမျိုးသား မီဒီယာ
မြန်မာ- ထိုင်း နယ်ခြား သောင်ရင်းမြစ်ပေါ်တွင်တည်ဆောက်ထားသည့် နှစ်နိုင်ငံချစ်ကြည်ရေး တံတား အမှတ် ၂ ကို နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် ထိုင်းနိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ် ပရာယွဒ် ချန်အိုချာတို့ တက်ရောက်ကာ ယနေ့ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။
ချစ်ကြည်ရေးတံတား အမှတ် ၂ သည် ထိုင်းနိုင်ငံ မဲဆောက်မြို့နှင့် မြန်မာနယ်စပ်မြို့ မြဝတီတို့ကို ဆက်သွယ်ထားပြီး ယခင် ချစ်ကြည်ရေးတံတားအမှတ် ၁ ၏ မြောက်ဘက် ၅ ကီလိုမီတာခန့်တွင် တည်ရှိသည်။
တံတားအရှည်မှာ ထိုင်းဘက်ခြမ်းတွင် ၁၇ မီတာရှိပြီး မြန်မာဘက်ခြမ်းတွင် ၄ မီတာရှိကာ ၂၀၁၅ ခုနှစ်မှ စတင်၍ တည်ဆောက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကာ ကုန်ကျစရိတ်အနေဖြင့် ထိုင်းဘတ်ငွေ သန်း ၄၂၀၀ ကျော် ရှိကြောင်းသိရသည်။
တံတားသစ် ထပ်မံ ဖွင့်လှစ်နိုင်မှုကြောင့် နှစ်နိုင်ငံအကြား ကုန်သွယ်ရေး၊ ပို့ဆောင်ရေး၊ ခရီးသွား ကဏ္ဍနှင့် ယဉ်ကျေးမှု ဖလှယ်ရေး တို့မှာတိုးတက်လာမည်ဖြစ်ပြီး နှစ်နိုင်ငံပြည်သူများအကြား ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနှင့် ထိတွေဆက်ဆံမှုများ လည်း ပိုမ ကောင်းမွန်လာမည်ဖြစ်ကြောင်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က တံတားဖွင့်ပွဲတွင် ပြောသည်။
ထို့ပြင် အိမ်နီးချင်း နှစ်နိုင်ငံ၏ ဆက်ဆံရေးကို များစွာ အလေးထားကြောင်းနှင့် နှစ်နိုင်ငံ ပြည်သူ များရဲ့ အကျိုးစီးပွား ပိုမို တိုးမြှင့်နိုင်ရေး ထိုင်းနိုင်ငံနှင့်လက်တွဲဆောင်ရွက်ရန် အမြဲပဲ အဆင့်သင့် ရှိနေကြောင်းလည်း ၎င်းကပြောခဲ့သည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က “နှစ်နိုင်ငံ အကြား ထိတွေ့ ဆက်ဆံမှုနှင့် ပြည်သူများအကြား အကျိုးစီးပွား ကိုလဲ တိုးမြှင့်ဖော် ဆောင်လာနိုင်မယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်။ မဟာမဲခေါင်ဒေသ စီးပွားရေးစြင်္ကန်ကို ဖြတ်ကျော်လျှက် အရှေ့-အနောက် စီးပွားရေး စြင်္ကန်တလျောက်ရှိ အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံများသို့ ဆက်သွယ်ပေးမယ့် အစိတ်အပိုင်းတခု ဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်”ဟု ပြောသည်။
ထိုင်းနိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ် ပရာယွဒ် ချန်အိုချာကတော့ တံတားဖွင့်ပွဲတွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် တွေ့ဆုံခဲ့ရသလို အိမ်နီးချင်း နှစ်နိုင်ငံအကြား ထူးခြားသည့်ဆက်ဆံရေးကို ပိုမိုခိုင်မာစေခဲ့ကြောင်း ၎င်း၏လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာတွင် ဖော်ပြခဲ့သည်။
မြန်မာနှင့် ထိုင်း နယ်စပ်ဒေသ ကုန်သွယ်ရေးမှာ ၂၀၁၈- ၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာနှစ်အတွင်း စုစုပေါင်း အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၁၄၄. ၆ သန်းရှိကြောင်း၊ ပို့ကုန်မှာ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၈၄. ၀၁၃ မီလျံနှင့် ပို့ကုန်မှာ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၆၀.၆၂၄ မီလျံရှိကြောင်း ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာန တရားဝင်ထုတ်ပြန်ချက်အရ သိရသည်။
ဆက်စပ် ဖတ်ရှု့ရန် – ထိုင်း-မြန်မာ ချစ်ကြည်ရေး ဒုတိယမြောက် တံတား မနက်ဖြန်ဖွင့်မည်
Topics: ချစ်ကြည်ရေးတံတား, ထိုင်း- မြန်မာ